२० अर्ब ७६ करोडको निर्यात हुँदा एक खर्ब ३० अर्बको व्यापार घाटा - Online Majdoor
काठमाडौँ, ७ असोज । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा कुल वस्तु व्यापार घाटामा ७०.६ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. एक खर्ब २९ अर्ब ९७ करोड पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बिहीबार सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार कुल वस्तु व्यापार घाटामा आव २०७७÷७८ को तुलनामा उल्लेख्य वृद्धि भएको हो ।
सो आवमा त्यस्तो घाटा २२.२ प्रतिशतले घटेको थियो । चालू आवको पहिलो महिनामा कुल वस्तु निर्यात ११६ प्रतिशतले वृद्धि भई रू.२० अर्ब ७६ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यात ८.९ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो ।
केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार गन्तव्यको आधारमा भारत, चीन तथा अन्य मुलुकतर्पm क्रमशः १६७.० प्रतिशत, ४७.८ प्रतिशत र १७.५ प्रतिशतले निर्यात वृद्धि भएको छ । वस्तुगत आधारमा सोयाविन तेल, पाम तेल, धागो (पोलिस्टर तथा अन्य), जुस, पिनालगायतका वस्तुको निर्यात बढेको छ । यस्तै अलैँची, आयुर्वेदिक औषधि, जडीबुटी, तार, तयारी छालाका सामानलगायत वस्तुको निर्यात घटेको छ ।
चालू आवको पहिलो महिनामा कुल वस्तु आयात ७५.७ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. एक खर्ब ५० अर्ब ७३ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात १९.६ प्रतिशतले घटेको थियो । वस्तु आयात गरिने मुलुकका आधारमा भारत, चीन तथा अन्य मुलुकबाट भएको आयात क्रमशः ५८.७ प्रतिशत, ८७.६ प्रतिशत र १२०.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
वस्तुगत आधारमा पेट्रोलियम पदार्थ, यातायातका साधन तथा पार्टपुर्जा, कच्चा सोयाविन तेल, एमएस बिलेट, सुनलगायत वस्तुको आयात बढेको छ भने रासायनिक मल, सिमेन्ट, सुर्ती, हवाईजहाजका पार्टपुर्जा, तयारी पोशाकलगायत वस्तुको आयात घटेको छ ।
अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अनुपात ११.२ प्रतिशत थियो । समीक्षा अवधिमा भारतबाट अमेरिकी डलर भुक्तानी गरी रू. १८ अर्ब ८६ करोड बराबरको वस्तु आयात भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा रू. नौ अर्ब २६ करोड बराबरको यस्तो आयात भएको थियो । रासस
संसद्लाई अनिर्णयको बन्दी नबनाऔँ
भक्तपुर काण्ड : एक संस्मरण